Xukumadda Soomaaliya oo sheegtay in ay hubiso hantida qofka ay shaqaaleysiineyso – Kalfadhi
Reysal Wasaare Kuxigeenka Soomaaliya, Mahdi Maxamed Guuleed, ayaa ammaan ku hagoogay Nidaamka Maaliyadeed ee Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS). Waxa uu sheegay iney xukumaddu dib u qarameysay adeegyo dowladeed oo ay hay’ado gaar loo leeyahay qabanayeen. Waxa uu xusay in dakhli ururintii ay hay’ad walba oo dowladeed si gooniya u sameyn jirtay ay maanta sameyso Wasaaradda Maaliyadda oo kaliya.
“Maanta waxaa noo suuragashay in adeeg kasta ee la qabanayo ay Wasaaradda Maaliyaddu u xil-saaran tahay, dakhligii la ururiyana ay Wasaaradda Maaliaddu u xil-saaran tahay” ayuu yiri Reysal Wasaare Kuxigeenka Soomaaliya, Mahad Guuleed. Sida uu hadalka u dhigay, waxa uu sheegay in ay Qaramada Midoobay, Hay’adda Lacagta Aduunka (IMF) iyo Bangiga Aduunkuba ka marqaati kaceen in Nidaamka Xisaabaadka Soomaaliya uu hadda la jaan-daaqadi karo kan caalamka.
Isaga oo Londhan ugu qudbeynayey Jaaliyadda Soomaalida Ingiriiska ayuu Xukumadda ku ku tilmaamay mid u unkan iney la dagaasho musuqa, isaga oo sheegay in si arrinkaas looga mira-dhaliyo Wasaarad kasta loo sameeyey qorshe lagula xisaabtamo. “Wasiir kasta waxaa u yaala qorshe lagula xisaabtamo” ayuu yiri Guuleed. “Markaan xilka qabanay waxaanu dhaxalnay 25 Wasaaradood iyo shirkado oo ay mid walba dakhli ururiso” ayuu ku daray hadalkiisa. Waxa uu markaas ku ammaanayaa Xukumadda Kheyre in ay arrintaas meesha ka saartay.
Waxa uu sheegay in si loola dagaalamo Musuqa ay Xukumaddu hubiso inta ay gaarsiisan tahay hantida qofka kusoo biiraya shaqada dowladda, sida uu hadalka u dhigay. “Qof kasta oo la magacaabo waxaa loo furaa fayl, oo ah inuu sheego hantida uu haysto” ayuu yiri Reysal Wasaare Kuxigeenku. Waxa uu intaa raaciyey in ay isaga iyo Kheyre ka xisaabsadaan Wasiir kasta shaqadii uu qabtay, markuu sanadka sii dhamaanayo.
Isaga oo bogaadinaya la dagaalanka dhaqanka musuq-maaduqa ayuu sheegay in ay isaga iyo Madaxweyne Farmaajo la xiriireen, kadibna ay bogaadiyeen Maxamed Jaamac Abgaal oo Wasiir kasoo ahaa Somaliland, kaas oo dadweynaha u soo bandhigay in ay cafiyaan, kadib markii uu ka shakiyey in xanuuno ku dhacay uu ka qaaday hanti qaran oo uu si gaar ah u isticmaalay. “Madaxweyne Farmaajo waa uu wacay. Waa uu u hambalyeeyey. Waxa uu yiri walaal waan kuu duceyneynaa, shacar baanu kaa baranay” ayuu yiri Mudane Guuleed.
Sanatar sheegay iney Xukumadda la wadaagayaan joojinta ka bixista AMISOM ee Hirshabeelle